Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football any Brezila Ny tantaram-pitiavan'i Marquinhos Childhood Plus untold
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "Marquinhos". Ny tantara nosoratan'i Marquinhos Childhood plus ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahavariana hatramin'ny vanim-potoana hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ny tantaram-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana ny tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, samy mahafantatra ny tahan'ny asany avokoa ny tsirairay ary mahomby amin'ny fiarovana iray. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Marquinhos izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, Marquinhos (voarohirohy Marcos Aoás Corrêa) dia teraka tamin'ny andro 14 tamin'ny 1994 tao São Paulo, Brezila. Teraka tany amin'ny reniny Alina Aoás sy ny rainy Marcos Barros Corrêa izy.
Marquinhos 'ray aman-dreny Marcos Barros sy Alina Aoás. Credits: Instagram.
Ny tanora Marquinhos dia nipoitra tao amin'ny tanàn-dehibe ao São Paulo izay fantatra amin'ny anarana hoe renivohitry ny baolina Breziliana. Ny fanatanjahatena dia efa am-polony taona maro, dia nanangana ny fomba fiainan'ny mponina ao an-tanàna, anisan'izany ny mofomamy Marquinhos izay nijery lalao Arena Arena na dia bevohoka aza izy ny fialambolin'ny baolina kitra.
Nankasitrahan'i Marquinhos ny Korintiana tany an-kibon-dreniny talohan'ny nahaterahany. Credits: Instagram
Tsy mahagaga àry raha nanomboka nilalao baolina i Baby Marquinhos raha vao afaka nandeha. Niroborobo tamin'ny baolina kitra ny marquinhos, teo anilan'i Luan Aoás sy ny anabaviny Riama Aoás, niaraka tamin'ny zokiny lahy teo aloha, Luan Aoás sy ny anabaviny Riama Aoás, fa tsy voatery hihaona amin'ny filany ara-bola amin'ny ho avy, fa ho tanteraka kosa ny zavatra fantany taloha. Tsy mahagaga raha nisy Marquinhos niorina maromaro taorian'izay nilaza fa:
Fony mbola tovolahy aho dia te ho mpilalao baolina kitra foana. Niasa mafy aho mba hahatongavana any amin'ny toerana misy ahy amin'izao fotoana izao, niaro fikambanana lehibe aho ary hanome ny tsara indrindra amin'ny tenako, amin'ny hery sy ny fitsiriritana. Tsy misy fetra ny hoavy, handeha foana aho.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Raha lehibe tao São Paulo i Marquinhos, dia nanana zanak'olo-mpomba azy, Moreno Aoas Vidal izay tamin'izany fotoana izany, mpilalao baolina miaraka amin'ny ekipa lehibe ao São Paulo izay ekipa mpilalao baolina kitra - Corinthians. Ny fivoaran'i Moreno tao Corinthians dia nanentana ny fanahin'i Marquinhos sy Luna zokiny lahatra mba hanatevin-daharana ny rafitry ny tanora ihany koa raha vao 8 efa antitra fotsiny ny taloha.
Marquinhos dia efa antitra 8 fony izy nanaraka ny Korintiana. Credits: Instagram.
Mahaliana ny manamarika fa mbola tsy mpiaro i Alvin. Nanomboka ny fampisehoana ny baolina kitra tamin'ny alàlan'ny fandehanana an-dalam-pandrosoana ho an'ny mpiaro iray ary nianatra tao amin'ny Salesian College ao Santa Teresinha ao São Paulo, alohan'ny hidirany amin'ny Corinthians ao amin'ny 2002.
"Tia mandray anjara amin'ny lozam-piaramanidina izy. Izy koa dia mpilalao mpiaro, saingy isaky ny manapa-kevitra ny ho mpiambina izy dia voafidy ho ny safidy voalohany amin'ny asany ". Tadidio i Adalberto de Oliveira Barbosa, mpandrindra ny hetsika fanatanjahan-tena sy ny Dance amin'ny sekoly.
Foto-kevitry ny ankizy kely momba an'i Marquinhos ho mpitifitra. Credits: Instagram.
Ny mahaliana indrindra dia ny hoe i Marquinhos dia nihevitra ny ray aman-dreniny sy ny mpanazatra fa izy ireo dia manan-talenta eo amin'ireo mpilalao ara-panatanjahan-tena (Luna sy ny rahalahin'i Moreno). Na izany aza, dia nahita sy nampivelatra fahaizana izy tamin'ny fanorenana asa teo amin'ny rafitry ny tanora tao Corinthians.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Asa fanorenana
Ny fahatongavan'i Marquinhos tamin'ny alàlan'ny laharam-piadidian'i Korintiana dia nahatratra haavony ambony nanomboka tamin'ny 2011 fony izy ampahany tamin'ireo tanora tanora Brazillian izay nahazo ny Champions Xnumx Amerikana Atsimo-Amerikana teo ambany 2011 ary nahafeno fepetra ho an'ny FIFA teo ambanin'ny Fiadiana ny amboara eran-tany 17.
Marquinhos ao amin'ny Corinthians ao amin'ny 2011. Credits: Global Sports.
Ny fifampiraharahana niaraka tamin'ny Corinthians dia nahita an'i Marquinhos voalohany tamin'ny ekipa voalohany tamin'ny klioba tamin'ny 18th of February 2012 ary taorian'izay, dia nahitana horonantsary vitsivitsy tamin'ny fampielezan-kevitra Campeonato Brasileiro Série A sy 2012 Copa Libertadores. Nosoratana tamin'ny rakitra tsara ho an'ny Corinthians sy ny ekipa nasionalin'i Brezila, i Marquinhos dia tamin'ny farany 2012 dia nivarotra tany Roma, izay nahitana ny hetsika 26 Serie A miaraka amin'ny fampisehoana 4 Coppa Italia alohan'ny hahatongavana ho any Paris Saint Germain.
Marquinho Voasonia ho PSG amin'ny 19th of July 2013. Credits: Sambafoot.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mitsangàna mba haka izany
PSG dia nanolotra tontolo vaovao feno fahasahiana ho an'i Marquinhos izay toa voatendry hahomby, satria izy no nametraka ny tanjony voalohany tamin'ny klioba, tao amin'ny laharana ofisialy nandritra ny fandresena 4-1 an'ny PSG tamin'ny Olympiacos tamin'ny Septambra 2013. Andro vitsy taty aoriana, niorina tamin'ny fahatsiarovany voalohany i Marquinhos tamin'ny fanatsarana ny tanjon'ny liginy voalohany tamin'ny fandresen'ny vondrona 3-0 Champions League an'i Benfica. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Marquinhos dia tsy nahazo latsaky ny 5 noho ny PSG. Credits: Instagram.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Marquinhos dia lehilahy manambady izay mampiseho anao ny tsipiriany mahakasika ny fiainam-panambadiany, ahitana ny fomba nihaonany tamin'i Carol Cabrino vadiny. Mba hanombohana, ny vadin'i Marquinhos 'Cabrino dia tsy ary tsy mpankafy baolina kitra mihitsy. Izy dia mpankafy ara-batana izay nanohy nanao asa an-kira ary matetika nibaribary tao amin'ny trano karaoke manodidina an'i Brezila.
Tao anatin'ny iray amin'ireo asa toy izany no nisehoany tao amin'ny X-Factor Breziliana antsoina hoe Jovens Talentos ao amin'ny 2014. Ny fahombiazany tamin'ny fahitalavitra Tv dia nanintona ny sain'ny Marquinhos izay nanampy azy haingana tao amin'ny facebook.
"Nanampy ahy tao amin'ny Facebook izy, nosoratany tamiko isan'andro, dia naneho hevitra momba ny sariko izy."
Nambarany tamin'i Canal + izy.
Marquinhos dia nihaona ary nanomboka nampiaraka ny vadiny Carol Cabrino tao amin'ny 2014. Credits: FabWags.
Nanomboka nifankatia ilay tovovavy ary nanambady tamin'ny 2nd of July 2016. Ny lanonana dia natao teo amin'ny torapasika iray tao Trancoso.
Nidina an-dalamby niaraka tamin'i Carol Cabrino vadiny ny Marquinhos tamin'ny 2nd of July 2016.
Ny fanambadiany dia notahiana niaraka tamin'ny zanakavavy Maria Eduarda Cabrino Correa teraka tamin'ny andro 1st of November 2018. Ilaina ny manamarika fa i Cabrino dia nandeha niasa noho ny fahaterahan'ny zanakavavin'izy ireo fony izy tao amin'ny kianja Parc des Princes Frantsa mba hijery ny marquinhos nilalao ny lalao ligy ligy manohitra an'i Anderlecht.
Marquinhos miaraka amin'i Carol Cabrino sy ny zanaka vavy Maria. Credits: Revista Quem.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Marquinhos dia teraka ho mpianakavy ara-panatanjahantena amin'ny 5. Mampiditra tsipirian-kevitra momba ny mpikambana ao amin'ny fianakaviany izahay.
Momba ny rain'i Marquinhos: Ny dadan'i Marquinhos dia tsy olona hafa fa Marcos Barros Corrêa. Marcos dia ny zava-drehetra ho an'i Marquinhos izay mihevitra azy ho maherifony, mpanolo-tsaina, namana, namana, ary ny toetra hafa maha-ray tsara azy.
Marcos Barros Corrêa dia raim-pianakaviana ary ny zava-drehetra ho an'i Marquinhos zanany. Credits: Instagram.
Momba ny reny Marquinhos: Alina Aoás dia ilay renim-pitiavana sy be fiahiana izay hira fiderana nataon'ny Marquinhos amin'ny fomba manaraka:
"Misokatra foana ny sandrinao rehefa mila mifamihina aho. Ny fonao dia mahafantatra ny fomba hahafantarana rehefa mila namana aho. Ny masonao miavaka dia mihamatanjaka rehefa mila lesona aho. Ny herinao sy ny fitiavanao no nitondra ahy tamin'ny fiainana ary nanome ahy ny elatra izay nila nanidina ny vadiko ".
Marquinhos dia nizara fifandraisana akaiky tamin'ny reniny Alina Aoás: Credits: Instagram.
Ny zokin'i Marquinhos dia zokiny lahy Luan Aoás. Nihalehibe ny duo nifampizara tombontsoa iombonana tamin'ny baolina kitra. Nanapa-kevitra ihany anefa i Lwin fa hihoatra ny rahalahiny ao amin'ny fanatanjahatena i Marquinhos. Na dia izany aza, dia tena akaiky an'i Marquinhos izy ireo manoritsoritra an'i Luan ho ilay rahalahy tsara indrindra azony angatahana.
Marquinhos miaraka amin'i Luan zokiny lahy. Credits: Instagram.
Ny anabavy tokana Marquinhos no lovan'i Riama Aoás izay nozakainy tahaka ny printsy taorian'ny reny vavy.
Avy any ankavia miankavanana: Marquinhos zokiny lahy Luan Aoás, zandriny vavy Riama Aoás sy Marquinhos tenany. Credits: Instagram.
Marquinhos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny fiainan'ny tena manokana
Manao ahoana ny endriky ny androm-piainan'ny andro iray amin'ny fiainan'i Marquinhos izay nofaritan'ny namana mifantoka amin'ny toetra maha-sembana azy ?. Ho an'ny mpanombona, i Marquinhos dia tia ny fandaniana fotoana tsara amin'ny fianakaviana isaky ny mahazo fahafahana hanao izany indrindra amin'ny zanany vavy izay mihamitombo haingana.
Marquinhos dia manana fifamatorana akaiky amin'i Maria zanany vavy. Credits: Instagram.
Lavidavitra ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny fianakaviana, tia ny milalao lalao video i Marquinhos ary miasa amin'ny toeram-piofanana. Ny fiaraha-miasa dia manampy azy hampivelatra ny tetika sy ny faharetana izay mahatonga azy ho avo kokoa amin'ny fiarovana.
Ny lalao video sy ny fiasa amin'ny toeram-piofanana dia manampy ny marquinhos hampitombo ny tetika sy ny faharetana. Credits: Instagram.
Ny fampisehoana ny zava-misy tsy fantatra momba an'i Marquinhos dia manana tatoazy eo amin'ny tongony havia ny lalao baolina kitra. Ny zavakanto iray izay maneho palmie roa mafy voa mafy dia nofaritana ho Marquinhos Mandrakizay. Hita taratra amin'ny fankasitrahany ny tsy fivadihana sy ny fanohanana ny fianakaviana sy ny namana.
Marquinhos dia manana tatoazy eo amin'ny tongony havia izay lazainy ho "Firahalahiana Mandrakizay".
Ambonin'izany, Marquinhos dia Kristianina izay mino fa ny hery matanjaka indrindra eo amin'izao rehetra izao dia ny finoana !.
Marquinhos dia manondro an'i Christain ary mihevitra ny finoana ho hery matanjaka. Credits: Instagram.
Raha mbola tany Rôma i Marquinhos dia nilalao teo ambanin'ny anarana hoe "Marcos" izy mba tsy ho diso noho ilay mpiara-miasa aminy Marquinho (tsy misy 'S').
Tany Roma dia nandray ny anarana hoe "Marcos" i Marquinhos. Credits: Instagram.
Ny fanadihadiana ny fandoavam-bola fandoavam-bola € 31.4 ho an'ny PSG dia nahatonga ny fampahalalam-baovao avo lozam-pifamoivoizana rehefa nipoitra ny fisarahana. Ny BBC Sport dia nilaza fa ny saram-piterahana avo indrindra ho an'ny zatovo iray tamin'izany fotoana izany raha ny Sky Sports kosa dia nitatitra fa ny fahadimy indrindra amin'ny fifindrana tahaka izany. Toy izany koa, ny Le 10 Sport ao Frantsa dia nandrakitra izany ho ny fahatelo avo indrindra raha ny fahitalavitra Frantsay BFM TV no nanamarika fa io no fahadimy indrindra amin'ny fotoana rehetra ho an'ny mpiaro.
Marquinhos dia manana fifandraisana akaiky amin'ny Thiago Silva izay matetika no nampitahain'izy sy tamin'ny tranga sasany antsoina hoe "Thiago Silva" kely. Ankoatra ny fampitahàna, i Marquinhos dia mihevitra an'i Thiago ho modely ho an'ny modely ary mazava ho azy fa samy manana ny fahatakarany matotra ao Paris Saint-Germain izy ireo.
Marquinhos dia manana fifandraisana akaiky amin'i Thiago Silva. Credits: Facebook.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Marquinhos momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-bita tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Edinson Cavani Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Daty efa namboarina: 17 septambra 2020
Marco Verratti Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra